အောင်မြင်သောလူမှုရောင်းဝယ်ရေးနည်းဗျူဟာ၏အခြေခံ Martech Zone
အ ၀ င်အထွက်နှင့်အထွက်အ ၀ င်သည်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်အကြားဆက်နွှယ်နေသည့်အငြင်းပွားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံအရောင်းခေါင်းဆောင်များက၎င်းတို့တွင်လူအများနှင့်ဖုန်းနံပါတ်များပိုများပါကရောင်းအားပိုမိုရနိုင်သည်ဟုထင်ကြသည်။ စျေးကွက်မြှင့်တင်ရေးအတွက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဘတ်ဂျက်သာရှိပါကပိုမိုရောင်းအားကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်ဟုစျေးကွက်ရှာဖွေသူများကယူဆလေ့ရှိသည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်မှန်ကောင်းမှန်နိုင်သော်လည်း ၀ ယ်ယူသူများသည်အွန်လိုင်းလိုအပ်သမျှသုတေသနပြုလုပ်နိုင်ရန် B2B အရောင်းယဉ်ကျေးမှုသည်ယခုပြောင်းလဲသွားပြီ။ အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ခွဲခြားမှုသည်မှုန်ဝါးနေသည်။
နောက်လာမည့်အွန်လိုင်းဝယ်ယူမှုကိုလေ့လာနိုင်သည့်စွမ်းရည်နှင့်အတူအရောင်းပညာရှင်များသည်သတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေနေသည့်နေရာတွင်အရောင်းပညာရှင်များကိုမြင်နိုင်ရန်နှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရန်အခွင့်အရေးရရှိသည်။ အကြောင်းအရာများ၏စွမ်းအားကိုအသုံးချပြီးသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်နေရာတွင်ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အာဏာကိုတည်ဆောက်နေကြသောအရောင်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည်ရလဒ်ကောင်းများရရှိနေသည်။ Blogging, Social Media, စကားပြောအခွင့်အလမ်းများနှင့်စီးပွားရေးကွန်ယက်များသည်ရောင်းသူများအနေဖြင့်အလားအလာကိုတန်ဖိုးထားရန်သူတို့၏စွမ်းရည်ကိုတင်ပြနိုင်သည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
B2B အရောင်း၊ ဝယ်သူနှင့်လူမှုရောင်းဝယ်ရေးမဟာဗျူဟာ
ဝယ်သူဘယ်မှာရှိသလဲ - LinkedIn, Twitter, Facebook အုပ်စုများနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုဒ်များသည်ကြီးကျယ်သောကွန်ရက်စာမျက်နှာများဖြစ်ပြီးရောင်းအားပညာရှင်များသည် ၀ ယ်သူများကိုရှာဖွေနိုင်ပြီးနာမည်ကောင်းရနိုင်သည်။
တန်ဖိုးကိုပေးပါယုံကြည်စိတ်ချမှုတည်ဆောက် - အကြောင်းအရာများကိုကောက်ယူခြင်း၊ မေးခွန်းများဖြေဆိုခြင်းနှင့် ၀ ယ်သူများအား (သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအပြင်၌ပင်) ကူညီခြင်းကသင့်အားယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုတည်ဆောက်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
Value ကို + ယုံကြည်စိတ်ချရ = အခွင့်အာဏာ - အခြားသူများကိုကူညီခြင်းအတွက်နာမည်ကောင်းရှိခြင်းကသင့်အားကြီးမားသောအရောင်းအရင်းမြစ်ဖြစ်စေသည်။ B2B ၀ ယ်သူများသည်အရောင်းဝန်ထမ်းနှင့်မရင်းနှီးချင်ကြပါ။ သူတို့စီးပွားရေးအောင်မြင်ရန်ကူညီမည့်မိတ်ဖက်တစ် ဦး ကိုရှာလိုကြသည်။
အခွင့်အာဏာသည်ယုံကြည်မှုကို ဦး ဆောင်စေသည် - ယုံကြည်မှုသည် B2B ၀ ယ်သူတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အခြေခံဖြစ်သည်။ ယုံကြည်မှုသည်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတိုင်းအတွက်သော့ချက်ဖြစ်ပြီး ၀ ယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်၏နောက်ဆုံးအတားအဆီးဖြစ်သည်။
ယုံကြည်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားစေတယ် - သင်ဝယ်သူယုံကြည်စိတ်ချသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၎င်းတို့ကိုသင်ကူညီနိုင်သည်ကိုသူတို့တွေ့သောအခါသူတို့ရောက်ရှိသွားလိမ့်မည်။
ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနီးကပ်ရရှိသွားတဲ့! - အရောင်းအ ၀ ယ်ပညာရှင်တိုင်းသည်အခွင့်အရေးရရန်စဉ်းစားလိုကြသည်၊
ပြောင်းလဲနေသောအရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရှုထောင့်နှင့်ပတ်သတ်သောပြောဆိုမှုများစွာရှိသည်။ သို့သော်ဒီဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကမောင်းထုတ်သည် ဝယ်ခြမ်းသူ။ လူများသည်အွန်လိုင်းမှကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ ယ်ယူပုံသည်နှစ်များအတွင်းသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားသည်။ ယခုအချိန်တွင်ဝယ်လက်များသည်ယခင်ကထက်စွမ်းအားများပိုများလာသည်။ ဒီနေ့ဖောက်သည်ကိုဘယ်လိုလွှမ်းမိုးသလဲဆိုတာကိုပိုမိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏စိတ်အားတက်ကြွမှုကိုဖော်ပြသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုစုစည်းထားပါသည်။ ၀ ယ်သူများနှင့်မည်သည့်အကြောင်းအရာအမျိုးအစားများသည် ပိုမို၍ ကွဲပြားခြားနားသနည်း။ ဘယ်သူ့ကိုယုံကြည်ကြတာလဲ ၀ ယ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလွယ်ကူစေရန်မည်သည့်ကိရိယာများကိုသင်အသုံးပြုသင့်သနည်း။ ဟိုဆေး Sanchez, ဘဝအတွက်ရောင်းအား.
လူတွေက B2B ၀ ယ်သူကသတင်းအချက်အလက်ရှာပြီးဝယ်သူရှာနေတဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာနေတဲ့နေရာမှာမြင်နိုင်တဲ့အတွေးခေါင်းဆောင်တွေဆီကလူတွေ ၀ ယ်ကြတယ်။ မင်းရဲ့အရောင်းလူတွေရှိသလား။
Tags: b2bb2b ဝယ်လက်b2b လူမှုရေးရောင်းချမှုရောင်းအားဆိုရှယ်မီဒီယာအရောင်းအဖွဲ့လူမှုရေးအရောင်းအ
အရောင်း ဦး စားပေးအသုံးချခြင်းသည်သင်၏ပြင်ပအရောင်းအပြောင်းအလဲများကိုနှစ်ဆဖြစ်စေသည်